Xisbiyada MP iyo C oo doonaya in la adkeeyo xeerarka bey’adda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha Miljöpartiet Åsa Romson iyo afhayeenka xisbiga Centerpartiet ee arrimaha sharciga Johan Linander. Sawirle: TT
Xisbiyada MP iyo C oo doonaya in la adkeeyo xeerarka bey’adda
La daabacay måndag 27 januari 2014 kl 13.58
Xisbiyada Doogga iyo Dhexe (Miljöpartiet iyo Centerpartiet) ayaa maanta dalab ku soo jeediyey in la adkeeyo xeerarka lagu maamulo bey’adda. Xisbiga Doogga ayaa isagu doonaya in Iswiidhen ay ka hormarto Midowga Yurub oo ay soo rogto sharci qaran oo lagu mamnuucayo waxyaalo badan oo maaddooyin sun ahi ku jiraan.
Ujeeddada laga leeyahay ayaa ah in nolol-maalmeedka dadka laga sifeeyo waxyaalaha sunta leh. Waxyaalaha xisbiga Dooggu doonayo in qaran ahaan la mamnuuco waxaa ka mid ah maaddooyinka kiimikada ah oo cuntooyinka ku darsami kara, iyo maaddooyin kiimiko ah oo lagu jilciyo dharka carruurta iyo waxyaalaha carruurtu ku cayaarto.
Qaybo badan oo hindisahaan ka mid ahi waxay waafaqsan yihiin siyaasadda xisbiga Dhexe, balse xisbiga MP wuxuu qabaa in waxbadaka hawluhu ay tartiib u socdaan.
Isla markaasna wuxuu xisbiga Dhexe soo jeediyey hindise lagu doonayo in la kordhiyo ganaaxa la saaro shirkadaha iyo in la xoojiyo ciqaabta ay muteysanayaan shirkadaha marar badan gala dembiyo la xiriira bey’adda.
Johan Linander oo ah afhayeenka xisbiga Dhexe ee arrimaha siyaasadda sharciga, isla markaas ah kuxigeenka guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee caddaaladda ayaa arrintaan ka yiri:
- Dembiyada bey’adda laga galo waa kuwo dhammaanteenba na saameeya. Waxaana ka mid ah tayada biyaha oo xumaada, kiimiko lagu siidaayo dhulka iyo hawada, iyo in la ugaarto xayawaanka qarka u saaran in ay dabargo’aan. Waana wax dhammaanteen muhiim in oo ah in aan mustaqbalka xal u helno dembiyada bey’adda laga galo.